मनिषाको पक्षमा गगन थापाले सुब्रमन्यमलाई दिए ट्विटमार्फत द'रिलो झा'पड ! -
मनिषाको पक्षमा गगन थापाले सुब्रमन्यमलाई दिए ट्विटमार्फत द’रिलो झा’पड !
काठमाडौं। सांसद गगन थापाले मनिषा कोइरालाको ट्विटमा आ’पत्ति जनाएका भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजका पति सुब्रमन्यमलाई लामो जवाफ फर्काएका छन्। सो ज’वाफमा थापाले अभिनेत्री कोइरालाले भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायत भूभाग अ’तिक्रमण गरेको विषयमा चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नुपरेको हो भनी सप्रसंग व्याख्याा गरेका छन्। नेपाली भूभाग लिपुलेकबारे भारत र चीनले सन् २०१४ मा नेपाललाई नै थाहै नदिई भारत र चीनको व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भनी सम्झौता गरेका कारण चीन समेत यो मामिलामा जोडिने बताएका छन्।
सुषमा स्वराजका पति स्वराजले मनिषाले यो द्विपक्षीय मामिलामा चीनलाई जोडेको भनी आ’पत्ति जनाएका थिए। सांसद थापाले सोहि सहमतिबाट अघि बढ्दै भारतले अहिले सडक निर्माण र उद्घाटन गरेको बताएका छन्। थापाले आफू प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीको भएतापनि नयाँ नक्शा जारी गर्ने सरकारको कदममा आफ्नो पार्टी लगायत नेपालमा सबैको साथ रहेको बताएका छन्।